नेपालीका कथाहरू विभिन्न कोणबाट लेखिन बाँकी छ – सत्य तथ्य र निष्पक्ष्य समाचारको लागि
साहित्य एक व्यापक विधा हो। यसमा लेखकहरूलाई संरचनागतबाहेक अन्य बन्धनमा बाँध्न खोजिँदैन।
यो जति पनि फैलिन सक्छ, जुनसुकै कुनामा गएर बस्न सक्छ। अर्कोतिर अर्थशास्त्र तथ्यांकहरूमा, स्थापित सिद्धान्तहरूमा वा गणित प्रयोग गरेर बनाइएका मोडलहरूमा आधारित भएर सावधान भएर बोल्नुपर्ने क्षेत्र हो।
अर्कोतिर साहित्यले अर्थशास्त्रलाई टेको दिन्छ। रूद्रराज पाण्डेको ‘रुपमती’ उपन्यासमा प्रमुख पात्र रविलालले लगाएको कपडाको वर्णनले विसं १९९० तिरको नेपालको मध्यमवर्गीय व्यक्तिले उपभोग गर्ने प्रवृत्तिबारे जान्न सकिन्छ भने बालकृष्ण समको मेरो कविताको आराधन पढ्दा राणाहरूले विदेशी आयातलाई कसरी हेर्थे भन्ने पनि जानकारी हुन्छ।सरदार भीमबहादुर पाँडेको त्यस बखतको नेपालले जुद्धशमशेरका पालाको नेपालको आर्थिक कथा भन्छ भने हर्क गुरूङको मैले देखेको नेपालले विसं २०३० को सेरोफेरोको नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक चित्र देखाउँछ। देवकोटाको मुनामदन र सीमापारिबाट लेखिएका लीलबहादुर क्षत्रीका ‘बसाइँ’ र ‘ब्रह्मपुत्रको छेउछाउ’ जस्ता साहित्यिक कृतिमा संवेदनशील राज्यको संरक्षणको अभावमा पहाडका हन्डर खाएर विदेश गएका नेपालीका कथा भेटिन्छन्।
साहित्यले अर्थशास्त्रलाई धेरै मद्दत गर्न सक्छ। पुरानो युगको खाद्यान्न उपभोगको कुरा गरौं। नेपालको अर्थशास्त्र मात्रै पढ्ने हो भने खाद्यान्न उपभोगको तथ्यांक धेरै अघिसम्म जाँदैन। गरूडनारायण गोङ्गलले विसं १८४६ मा लेखेको ‘सम्झना’ पढेर हामीलाई भक्तपुरे मल्ल राजा रणजित मल्लको खानाका लागि मसिना चामल, छाँटाको दाल, मुगीको दाल, घिउ, तेल, अचार, रोटी चाहिन्थ्यो भन्ने जानकारी हुन्छ।
पालपाको ल्याउ हिङ जिरो रि सिङको ल्याउ पिरो;
अष्टदल चौकी बसी गंगाजल झारीभरि;
अब अर्काे उदाहरण हेरौं।
विसं १८१२ मा जन्मेका उदयानन्द अर्ज्यालको वर्णन (जुन पछि पृथ्वीन्द्रोदय महाकाव्य भनेर प्रकाशित गरिएको छ)मा एक ठाउँमा जयप्रकाश मल्लले ललितपुरका प्रधानहरूलाई रिसाएर ‘तिमीहरु चोलो सिएर राजकोष भर्ने मान्छेले के गोर्खासँग लड्ने विदेशी सेना पाल्न सक्छौ’ भनेका छन्। कपडा बुन्ने पेसा ललितपुरका लागि त्यो बेला महत्वपूर्ण भएर त्यसो भनेका हुन् भने यो नाकाबन्दीले ललितपुरलाई गम्भीर प्रभाव पारेको हुँदो हो भन्ने अड्कल गर्न सकिन्छ। ललितपुरे राजा तेजनरसिंह मल्ल त गोर्खासँग नलडी भक्तपुरतिर भागेका थिए। यस्तै नुन नभएर पनि मानिसहरूले धेरै दुःख पाएका थिए।
अर्थात् ‘१० रूपैयाँमा जम्मा दुई थान च्यासिङ कपडा मिल्छ। तेल, घिउ नभएर प्रजाहरू जोगी जस्तै धुस्रे भएका छन्। मान्छेहरू नुनको तलतल मेट्न इँटामा मुख लगाएर चाटिरहेका छन्। भोटिया बाज आउँदा चराहरु रोइकराइ गरे जस्तो घरघरै रोइकराइ छ।’
पुराना जमानाको म्याक्रोइकोनोमिक तथ्यांकहरूको अध्ययनमा प्राध्यापक एङ्गस म्याडिसनको निकै योगदान छ। उनका अनुसार संसारको अर्थतन्त्र समग्रमा सन् १००० देखि सन् २००० सम्म ३०० गुणा बढ्यो। मुख्यगरी यो वृद्धि सन् १८२० पछि भएको थियो। औसतमा एक विश्ववासीको कमाइ सन् १००० मा रू. १०० थियो भने सन् १८२० मा जम्मा १५०। हाम्रा पुर्खाहरूको कमाइ यो गतिमा पनि वृद्धि नभएको हुँदो हो। किनकि यो वृद्धि पनि धेरैजसो प्रमुख एसियाली र युरोपेली मुलुकमा भएको थियो। सन् १८२० तिरको अरु कुरा जान्न हाम्रो मुलुकमा अर्थशास्त्रका तथ्यांकहरू संकलन गर्ने प्रचलन थिएन। नेपालमा त अझ राजाको सम्पत्ति गन्न हुँदैन भन्ने प्रचलन थियो।
सन् १८२० सम्म आइपुग्दा युरोपमा प्रिन्टिङ प्रेसको निकै विकास भइसकेको थियो। जर्मनीको मेन्ज सहरमा गुटेन्बर्गले बनाएको प्रिन्टिङ प्रेसको प्रमुख उद्देश्य धार्मिक किताब छाप्ने थियो। अमेरिकी अर्थशास्त्री ब्राड डेलोङका अनुसार जर्मनीमा त्यो बेला एउटा किताबको मूल्य एउटा बिएमडब्लू कारको जस्तो पर्थ्यो (जर्मन श्रमको मूल्यको हिसाब गरेर अहिले हेर्दा)।
नयाँ प्रेस सुरूमा भगवान, त्यसपछि ऐतिहासिक कथाका नायक, त्यसपछि अलौकिक र तिलस्मी चरित्रहरू छाप्नमा केन्द्रित भयो। सामाजिक यथार्थवादी धाराका साहित्यिक पुस्तक पछि आए। डिकेन्सले लन्डनको श्रमबजार र शोषणको यथार्थवादी चित्रणका कथा लेख्नु, जेन अस्टेनले ‘प्राइड एन्ड प्रेजुडिस’ र एमिली ब्रोन्टीले ‘वुदरिङ हाइट्स’मार्फत बेलायती गाउँका विषमताका कथा लेख्नुअघि नै रबिन्सन क्रुसो र गुलिभर ट्रावल्सले प्रिन्टिङ प्रेसको उपभोग सुरू गरेका थिए।
अर्थशास्त्रीहरूका लागि औसत जनताका दुःखकष्टको वर्णन राजामहाराजाको जत्तिकै महत्वपूर्ण हो। तर पुरानो साहित्यमा यो सजिलैसँग पाइँदैन। यसको असर गोर्खा राज्य विस्तारकालको मुलुकको जनजीवन बुझ्न सक्ने हाम्रो क्षमतामा परेको छ। हामीलाई थाहा छ, धेरै कारणले लडाइँ सजिलो थिएन। दामोदर पाँडेको पालामा विसं १८५८ मा एक मुरी बिजनको खेतको कर रू. १ थियो भने अंग्रेजसँग युद्ध गर्ने बेला त्यसको १३ वर्षपछि विसं १८७१ मा रू. ५। लडाइँ बढ्दै जाँदा धेरै नेपालीहरू यस्तै बढ्दो करको मारमा परेका थिए। घरका छोराहरू लडाइँमा घिसारेर लगिए। कैयौं बुहारी सती पठाइए।
‘गन विद द विन्ड’मा मार्गरेट मिचेलले लडाइँमा युवाहरू गएपछि घरमा बसेका महिलाहरुको दशाको कथा भने झैं हाम्रामा त्यसरी कथा भनिएनन्। केही अपवाद नभएका होइनन्। भाषावंशावलीमा पृथ्वीनारायण शाहले कब्जा गरेपछिको कान्तिपुरको वर्णन गर्दै भनिएको छ, ‘..येक नेवारका स्वास्नी अति राम्री थिइन्, गोर्षामहाराजबाट प्रवेश गर्‍या उप्रान्त डराई पैह्ले स्त्रीलाई मारी पछिबाट आफूले पनि ज्यान त्याग गर्‍यो।’
‘तहाँ रणभूमिमा श्येन भया, उलुक भया, काग भया, मसानकाग भया, ग्रिध्र भया.., स्याल भया,..पशुजात पन्छीजातहरू शूरवीर सिपाहीका आलो मासु आलो रगत बोसो गिदी आन्त्रा भुँडीसमेत यथेष्ठ षान पाउँदा ह्रिस्टपुष्टांग भयाका छन्।’
‘मोदीआइन’ मा महाभारत युद्ध नभइदेओस् भनेर प्रार्थना गरेर बसेका महिलाहरूको कथा छ, जो भगवान कृष्णको युद्ध गराएरै छाड्ने प्रवृत्तिबाट रूष्ट छन्।
पृथ्वीनारायण शाह मर्दा नौ जना श्रीमती सती गएका थिए। उनकी कान्छी श्रीमतीको उमेर निकै कम हुँदो हो। यी सतीहरु मर्दाको स्थिति कहिल्यै सजिलो हुँदैनथ्यो। भक्तपुरका युवराज अच्युत सिंह मर्दा विष्णुमतीमा उनकी रानी सती गएको हेरेपछि गरूडनारायण गोङ्गल बेहोस भएका थिए। त्यसपछि रणजित मल्लले माया गर्दै भनेका थिए, ‘हेर गड, तँ यति कमजोर रोगी रहेछस्, कसरी मसँग काशी जालास्? घरै फर्की।’
धेरै दुःख थियो। … त्यसबेला मान्छेहरू ५५/६० वर्षमा मर्थे। ६० वर्षमा मर्दा त ओहो उमेर भएर गएछन् भन्ने हुन्थ्यो। लेकमा भन्दा तल बेसीमा बस्ने मान्छे चाँडै मर्थे। किरिया बस्नेहरु सानासाना बालख हुन्थे।… रोग सबैतिर थियो। भुर्जुङ्खोलाका सुब्बाबाहेक सबै गाँडा थिए। घाचोक, काउँमान, लाचोकमा धेरै गाँडा र बोली बिग्रेका थिए; भिजुकीमा गाँडा थिएनन्। तोल्कामा थिए। सिसुवा, खुदीतिर विधवा बढी थिए। एक जना दिदीलाई सिसुवातिर बिहे गरेर नदिनू भन्दाभन्दै दिइयो, बिहे गरेको २७ दिनमा विधवा भइन्। पोखरामा नै औल लाग्छ भनेर मानिस बास बस्दैनथे। धिताल बाँस्कोटमा भने लाटा जम्मा दुई जना थिए।
नेपाली साहित्यमा त्यसरी छटपटाएका आमाहरूको दुःख शब्द बनेर पोखिएका विभिन्न उदाहरण पाइन्छन्। शङ्कर लामिछानेले ‘देउताको काम’ मा आमाबारे लेखेका छन्—
… (उनी) क्षयरोगबाट पीडित पतिपरित्यक्ता एक मास्टरनी थिइन्, एक मिडल स्कुलमा। पढाएर आउने पैसाबाट आफू र छोराको खाना, कपडा, पथ्य, उपचार र भवितव्यबाट जोगाइराखेको त्यो छल सम्पत्ति एकैपटक स्वाहा हुँदा.. आफ्नो मृत्युको निमन्त्रणा प्रत्येक खकारमा आइरहेका बेला पाँच वर्षको छोरो यो भवसागर कसरी पार गर्ला भन्ने विचारबाट उनको मुटु चिमोटीचिमोटी खाइरहेको हुँदो हो।
धनुषचन्द्र गोतामेको ‘घामका पाइला’हरूमा रोगले थलिएकी आमा साना सन्तानको मोहले छटपटिएकी हुन्छिन् र बिरामी हुँदा अस्पतालमा भन्छिन्— मेरो पवनको बिचल्ली गराएर म के मर्थें, सबै थान्को लाएर आफ्नो सप्कोमा बाँधेको साँचो बुहारीलाई जिम्मा लाएर, घरबार सुम्पेर मात्र म सन्तोषसित जानेछु।
हरिवंश आचार्य पनि आफ्नो बालकाल सम्झिँदै ‘चिना हराएको मान्छे’ (विसं २०६९)मा लेख्छन्—
मेरी (बाउन्न वर्षकी) आमालाई हामी ससाना छोराछोरीलाई छाडेर मर्न मन थिएन होला।… के गरेर तागत आउँछ, के गरेर बाँच्न सक्छु, जे गरेर भए पनि मेरा छोराछोरी टुहुरा नबनून् भनेर छटपटाउनुहुन्थ्यो रे आमा।
महाभारतमा शान्तिपर्वमा भीष्मले युधिष्ठिरलाई भनेका थिए, ‘राज्यको ढुकुटी भरिराख्नुपर्छ। भरेपछि यसलाई नचाहिने खर्च रोकेर, मितव्ययी हुँदै, राम्रोसँग जतन गरेर बचाउनुपर्छ र सधैं बढाउने कोसिस गर्नुपर्छ। यो शासकले नित्य गर्नुपर्ने काम हो। राजस्व उठाउन नसक्ने राजालाई सबैले हेप्छन् (हीनकककशं हि राजानं अवजानन्ति मानवाः)। तर ‘न कोशः शुद्धशौचेन न नृशंसेन जायते; पदं मध्यम आस्थाय कोशसङ्ग्रहणं चरेत्’ अर्थात् धेरै उदार भएर पनि राजस्व संकलन गर्न सकिँदैन, धेरै नृशंस भएर पनि हुँदैन, ठिक्क हुनुपर्छ।’
नेपाली भाषामा लेखिएका किताब त्यो बेलासम्म रामायण, महाभारत, स्वस्थानी, ऐतिहासिक चरित्रमा आधारित तिलस्मी खालकै थिए। भानुदत्तको हितोपदेश ‘मित्रलाभ’ (विसं १८३३), शक्तिबल्लभ अर्ज्यालको ‘हास्यकदम्ब’ (विसं १८५५), गौरेश्वर शर्माको ‘बेताल पञ्चविंशती’ (विसं १८६६) विष्णुपद पाध्याको ‘लालहीराको कथा’ (विसं १८८९) यसका केही उदाहरण हुन्।
विसं १९६० तिर सरकारी गोरखापत्र प्रेसको स्वामित्व केही समयलाई पाएका जयपृथ्वीबहादुर सिंहले सम्भवतः हाम्रो साहित्यको स्तर माथि लैजाने प्रयास गरेका हुँदा हुन्। तर धेरै सफल भने भएनन्। नेपाली साहित्यमा विविधता ल्याउन नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति नै चाहियो, जसमा बस्दाका अनुभवहरु बालकृष्ण समले आफ्नो जीवनी ‘मेरो कविताको आराधना’ मा उल्लेख गरेका छन्।
बढ्दै गएको शिक्षा र लामो समयको शान्तिले विस्तारै भने पनि धनी हुँदै निस्कँदै गरेको एक मध्यमवर्गीय तप्काले साहित्यको सुरूको विकासलाई निर्देशित गर्‍यो। र राणाशासनमा आएर केही यथार्थवादी लेखाइका राम्रा नमुना निस्कन थाले। पहलमान सिंह स्वाँरको ‘एकलाख रुपैयाँको चोरी’ (१९७४), पुष्करशमशेरको कथा ‘परिबन्द’ आदि यसका उदाहरण हुन् (पुष्करशमशेरको अर्को कथा स्वार्थत्याग पनि न्याय निरुपण गर्ने राणाकालीन शैली र त्यससँग व्यक्तिगत यौन वुभुक्षाको सम्बन्धबारे केन्द्रित छ)।
उद्योगमा लगानीका धेरैजसो कुराहरु जुद्धशमशेरको पालामा व्यवस्थित गर्न सुरू गरिए। सरकारी पहलमा बजारहरू (अर्थात् गोलाहरू) खोल्ने काम अलि पुरानै भए पनि सीमावर्ती क्षेत्रका महत्वपूर्ण सहर विराटनगर, नेपालगन्ज, वीरगन्ज खोल्ने, भित्री पहाडका धरानलाई सहरको रूप दिने काम वीरशमशेर र चन्द्रशमशेरको पालामा सीमामा भारतीय रेलको आगमनसँगै भए। भर्खरै बसेको सहर वीरगन्जमा रेल आउँदाको कथा सजीव रुपमा साहित्यमा उतार्ने काम चाहिँ धनुषचन्द्र गोतामेको विसं २०३५ मा घामका पाइलाहरुमार्फत भयो। अरू सहरका सुरूवाती दिनका कथा नकोरिएकाले ती विस्मृतिको गर्भमा रहे।
उदाहरणका लागि २०११ सालमा हृदयचन्द्रसिंह प्रधानले नारीवादी ‘स्वास्नीमान्छे’ लेखे। शंकर कोइरालाले आञ्चलिक उपन्यास ‘खैरेनीघाट’ २०१८ सालमा लेखे। भीमनिधि तिवारीले २०२७ सालमा प्रगतिशील उपन्यास ‘इन्साफ’ लेखे। र रमेश विकलले प्रगतिशील आञ्चलिक ‘अविरल बग्दछ इन्द्रावती’ २०४० सालमा लेखे। यी सबै उपन्यासले नयाँ गोरेटो कोरे र समाजको नयाँ तस्बिर देखाए।
तर पनि साहित्यले धेरै क्षेत्र छुन सकेको थिएन। संसारसँग जोडिँदै गरेको नेपालको सुरूवाती दिनका कथा पनि साहित्यमा राम्रोसँग लेखिएका छैनन्। राणाकालसम्म विदेशीका लागि नेपाल बन्द थियो। तर नेपालीहरुलाई विदेश जान खुला थियो। र नेपालीहरु विश्वविजेता जस्ता ब्रिटिसको पछि लागेर संसारका चारै कुना पुगेका थिए। घर सम्झी रोएको होला, डाँडा काटी गएको नेपाली भन्ने गीत गाउने धर्मराज थापाले टिपेको कथा यस्तै व्यक्तिको थियो। तर ती रोएर मात्र बसेका थिए कि हाम्रो देश किन अघि बढेन भन्ने सोचेर पनि बसेका थिए होलान्?
हामीले थाहा नपाएको प्रश्न अहिले के हो भने, कसरी नेपालीहरूको विदेश जाने क्रमले नेपाली समाजमा परिवर्तन ल्यायो? बाहिरबाट आएको धनले, रिटायर्डहरू र विधवाहरूले पाएको पेन्सनले, देखेर आएका नयाँ प्रविधिले कसरी गाउँहरूलाई फरक पारे? रेडियो घन्काउँदै, घडी लगाउँदै, रूमाल भिर्दै, चुरोट पिउँदै, तास खेल्दै आउने लाहुरेले नेपालको परम्परागत आर्थिक जीवनलाई कसरी फरक पारे?
के गरिब जनताको वित्तीय पहुँचको स्थिति राम्रो हुँदै गयो? के लाहुर जाने वर्गले धनमा लाहुर नजाने वर्गलाई जित्यो? राईलिम्बूहरू विसं १९५० तिर मात्र ब्रिटिस आर्मीमा जान सुरू गरेको परिप्रेक्ष्यमा के चौबिसे राज्यहरू पूर्वी राज्यहरूभन्दा आर्थिक रूपले, सामाजिक रुपले केही अघि हुनु लाहुरको उपज थियो? यी प्रश्नको उत्तर न अर्थशास्त्र, न साहित्यमा भेटिन्छ।
नेपालीको त्यो बेलाको आयातित सामानको उपभोग गर्ने संस्कृतिको समाजमा असर कस्तो पर्‍यो? साहित्यमा यसका केही वर्णन पाइन्छन्।
ती नयाँ विकासले ल्याएको परिवर्तनको आर्थिक रुपमा अझै राम्ररी र विस्तृत अध्ययन हुन सकेको छैन। तर साहित्यमा भने प्रतिबिम्बित भएको छ। सम्भवतः हास्यव्यङ्ग्यकार भैरव अर्यालले ‘जय भुँडी’मा प्रकाशित व्यङ्ग्यहरूमार्फत यी विकासलाई सबैभन्दा राम्रोसँग अमर बनाएका छन्। मान्छेहरू कुरै नबुझी लाहुर गएका छन् भन्ने तर्क उनको लाहुरेको यात्रासंस्मरणमा छ, जहाँ प्रमुख पात्र वीरबल अतिथि इन्जिनियरहरूले बनाइदिएको बाटोघाटोको नक्साझैं दसतिर टेढिएर लम्किन गएकोमा माफ माग्छ र ‘असारसाउनको माटो, बाइरोडको बाटो; ड्राइभर रमले रन्न, ट्रक यात्रुले टन्न’ भएको यात्रा गर्दै रक्सौल पुग्छ।
भैरव अर्यालको ‘चन्द्रलोक कसको’ निबन्धमा त्यस बेलाको काठमाडौंका युवाहरूको विदेशमा भएका अन्तरिक्षमा को पहिला हुने प्रतिस्पर्धासम्बन्धी अवधारणा कस्तो थियो भन्ने झलक पनि मिल्छ।
विष्णुमती नदीको काई लागेको बालुवामा मानिस दिसा गरिरहेछन्। नजिकनजिक भए पनि उनलाई लाज छैन।… बिचरा जाऊन् पनि कहाँ? सरकारी दिसाखानाको हालत त्यही हो, १००० जनापिच्छे एउटा होला।
पानी परिरहेछ, झमझम। भर्खरै राजदूतहरु र मन्त्रीहरूको मोटरको ताँती फर्क्यो— नरप्रताप थापाको शोकसभा थियो रे रञ्जनामा।… सडकपारिपट्टि एउटा माग्ने जस्तो मानिस गणेशथानको देवलको चौतारामा बसेर लगौंटीमा अलमलिएको जुम्रा मारिरहेछ।
महिला साहित्यकारहरूले सुरूमा बढी ध्यान दिएका बुहार्तन, प्रेमका मुद्दा र पछि केन्द्रित भएका इब्सेनको कठपुतलीको घरको नेपाली संस्करणका कथाहरुका अलावा बढ्दै गएको महिलाका आर्थिक भूमिकाबारे लेखेका छन्। विपन्न परिवारका दुःख पाएका महिलाहरूका कथा धेरै पाइन्छन्, त्यसका अतिरिक्त प्रेमा शाहको ‘पहेंलो गुलाफ’, मञ्जु काँचुलीको ‘वाकवाकी’मा सम्पन्न परिवारका महिला पात्रहरूको झलक छ। स्व. अङ्गुरबाबा जोशीको ‘अक्षर साधना’ र ‘गोधुली’ले एक महिला सफल पात्रको काठमाडौंमा आधारित कथा भन्छ। तर आजका महिलाहरूको अझै धेरै कथा नयाँ फ्रेमवर्कबाट लेखिन बाँकी छ।
राजनीतिक परिवर्तन देखिने खालका हुन्छन्। तिनका विभिन्न कोणबाट चर्चापरिचर्चा पनि हुन्छन्। तर मुलुकमा राजनीतिकसँगै धेरै आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन भएका हुन्छन्। तिनको सम्झना रहिरहोस् भनेर पनि केही यथार्थवादी साहित्यको जरूरत हुन्छ। एउटा फ्रेमवर्क र सिद्धान्तमा बाँधिएर उपलब्ध तथ्यांकहरूमा सीमित रहेर हेर्ने अर्थशास्त्रीका आँखाले यावत् मुलुकको विहङ्गम दृश्य देख्न सक्दैन, साहित्यले सक्छ। फ्रेन्च राज्यक्रान्तिबारे कार्लाइलले लेखे तर डिकेन्सको ‘अ टेल अफ टु सिटिज’ले त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सहायता गरेको छ।
एउटा कोणबाट मात्र कथा भन्दा त्यसको असर अर्कै पर्छ। तथ्यांकहरू, कथाहरू विभिन्न तरिकाले हेरिनुपर्छ। उदाहरणका लागि नेपाली रिपोर्ट मात्र हेर्‍यौं भने हामी दिनका दिन यत्रा मानिस मरेर बाकसमा आइरहेका छन्; तै पनि किन नेपालीहरू विदेश गएका छन् भन्छौं।
अर्थशास्त्री महेश्वर श्रेष्ठको एक अध्ययनअनुसार उनको अध्ययन समूहमा भएका विदेश गएका नेपाली दुई वर्षमा प्रतिएक हजार जनामा १.३ जना मरेका थिए भने यता देशभित्र सोही उमेरसमूहका नेपालीको मृत्युदर दुई वर्षमा प्रतिएक हजारमा ४.६ छ। अर्थात् विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीको मृत्युदर नेपालमा बस्ने सोही उमेरसमूहका नेपालीको मृत्युदरभन्दा कम छ।
यस तथ्यांकभित्र अरू उपकथा पनि छन्। अर्थशास्त्रभन्दा भित्र छिरेर, मिहीन तरिकाले समाजलाई केलाएका ‘बसाइँ’ जस्ता विभिन्न समुदायका, विभिन्न भेगका कथा हामीले पढ्नै बाँकी छ।
यस्ता कथाको बजार होला/नहोला भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। हालैका दिनमा उत्कृष्ट रूपले लेखे सबै खालका कथाको बजार छ भन्ने देखिएको छ। सरकार पनि यस्ता कलासाहित्य प्रवर्द्धन गर्न हिचकिचाउन हुँदैन।
सरकार चलाउनेहरूमा पनि कहिलेकाहीँ सरकारको प्रमुख दायित्व यस्ता ‘अनुत्पादनशील’ क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नु होइन भन्ने मत हुन्छ। यदि सम्झने हो भने केही दशकअघि मात्र सरकारहरूले यस्ता साहित्य तथा अन्य कलाका कुरामा ‘सब्सिडी’ दिनुहुँदैन भन्ने बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको मत थियो। र उनले सुरूमा त्यसैले धेरै बजेट फ्रिज गरिदिएकी थिइन्। अर्थशास्त्री जान मेयर्स्कफले सन् १९८८ मा लेखेको ‘इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ आर्ट्स इन ब्रिटेन’ त्यसैको प्रतिक्रियामा थियो, जसले सांस्कृतिक धरोहरहरूमा लगानी गर्न सरकारलाई त्यसपछि प्रेरित गर्‍यो। हामी थ्याचर जस्तै मुढे हुनुहुँदैन।
देश के हो? आखिर देश भन्नु, मुलुक भन्नु हाम्रो पुर्खाले देखेको एक सपना हो। नेपाल भन्ने कुरा छामेर छाम्न सकिँदैन। जसले राज्य विस्तार गर्दा जिते, तिनले सायद आफ्ना सन्तान यो मुलुकमा फलून् फुलून् भन्ने सोचेका थिए। जसले त्यो बेला हारे र पराजय स्विकारेर यो मुलुकमा बस्ने निर्णय गरे, तिनले पनि लडिराख्नुभन्दा पराजय स्विकार्नुमै आफ्ना सन्तानको भविष्य देखेका हुँदा हुन्।
(पोखरामा जारी नवौं नेपाल साहित्य महोत्सवमा अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले ‘साहित्यको अर्थ’ शीर्षकमा राखेका भनाइ)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस १४, २०७७,Source
Tags: नेपालीका कथाहरू विभिन्न कोणबाट लेखिन बाँकी छ
Previous …अनि म विदेश गइनँ
Next प्रचण्ड-माधवलाई खुलापत्र